» विवाह गर्ने चौतर्फी हल्ला चलेपछि अभिनेत्री श्वेता खड्का यसो भन्छिन् ! हेर्नुहोस विवाह गर्ने चौतर्फी हल्ला चलेपछि अभिनेत्री श्वेता खड्का यसो भन्छिन् ! हेर्नुहोस – हाम्रो खबर
विवाह गर्ने चौतर्फी हल्ला चलेपछि अभिनेत्री श्वेता खड्का यसो भन्छिन् ! हेर्नुहोस
काठमाडौं। चर्चित नायिका स्वेता खड्काले धनगढीका विजयेन्द्र रावतसँग मङ्सिर ५ गते बिहे गर्न लागेको खबरले यतिबेला चलचित्र जगतको माहोललाई तताइरहेको छ।
हल्लाबारे जिज्ञासा राख्दा स्वेताले भनिन्, ‘विवाह हुने भयो भने सबैलाई जानकारी गराउला । अहिले म सिंगल छु ।’ अभिनेता श्रीकृष्ण श्रेष्ठसँग २०७१ असार २३ गते स्वेताको विवाह भएको थियो । विवाह को एक महिना नपुग्दै श्रेष्ठको उपचारका क्रममा साउन २५ गते भारतमा निधन भएको थियो।